Umnxeba kuba free ngaphandle kwemvume kwaye ngaphandle yobhaliso
Nomngeni kunye iselula itshintshile ngokunxulumene enzima namathuba. Ngoko ke ngu-hayi nje icebo kunye lawo elifutshane ukuhlangabezana wavuma deadlines bafudukela, qhagamshelana ne-abahlobo sagcinwa, kodwa yonke imihla companion, stencils, ngokulula i-all-rounder. Ngokunxulumene ulwazi kuba kubhaliwe kuyo, kuya kunikwa kuphela kakhulu reluctantly ngaphandle Isandla. Oko kuthetha ukuba lula, umnini kusenokuba tracked ezantsi ngapha iselula. Ifowuni yindlela elungileyo indlela owakhe Ukuze ufumane ifowuni ukuba ilahlekile. Ukuze ukwazi kuba ngempumelelo indawo, nangona kunjalo, ezinye iinkalo iimfuno kufuneka kuzalisekiswa. A ojika kwi iselula yeyona nto ibalulekileyo yokuba zilawulwe, ngaphandle apho indawo mobile phones izakuba ukwenzeka. Kwelinye imeko, iteknoloji yenza indima enkulu, apho kuba indawo imiselwe. Ingaba yenziwa, umzekelo, positioning ngokuthi kuthethwa ka-GPS, nayo kuyimfuneko ukuba GPS lwenziwe. Kwimeko ubudala models ukuba musa kodwa kuba lo msebenzi, ayifakwanga ukusuka kolu hlobo positioning ukususela outset. Nokuba enzima iimfuno inkqubo esemthethweni iimfuno akunjalo, kuba underestimated. Kwi-nangona kukho tshintsho kwi-mthetho kwaye enxulumene easing kule ndawo, imvume kuyimfuneko, ukuba akukho ingozi kwi-komthetho okanye abantu ukuba inkcazelo. Xa locating omnye mobile phones ngaphandle Imvume kukho enjalo nto. Ngokufanelekileyo, ilungelo Personality, apho yinxenye ebalulekileyo amalungelo oluntu, akayi kuba enomda kwi-inkululeko abantu. Kanjalo, Ukuhlola akuvumelekanga. Nangona kunjalo, amathuba enjalo positioning ukuba abe soloko ikhona kwi-Intanethi. Njengoko ixesha elide njengoko akukho objections ukusuka Umntu, kufuneka silindele akukho zoko. Inyaniso uthi, nangona kunjalo, ukuba iindawo phones zenzelwe ngoko ke skillfully ukuba ezichaphazelekayo Umntu ayi ngobukho kuyo. Kufuneka kuyenzeka ukuba indawo lenziwa, kwaye Umntu kufuneka ifayile ingxelo, sinokukhokelela a prosecution kwi inkundla, oko kukuthi, nangona kunjalo, kuphela ezimbalwa kakhulu iimeko, ezinye umahluko apho kufuneka kufumaneka, ukuba omnye kwi befuna a wekhredithi kuba ekhawulezileyo-Intanethi iselula fixes, ingaba iindlela, kunye okanye ngaphandle ubhaliso wanikela. I ukuba akunjalo strain i-statutory directives, kufuneka ucinge nayo ngenyameko, kuba yintoni usenza. Inyaniso yeyokuba, nangona kunjalo, ukuba akukho ngakumbi enobudlelane kufuneka kwenziwa xa ngokwenene kuyimfuneko, njengoko kunjalo ngexesha langoku kwanti kwi-phambili i-data isitalato. Isahlulo, uphawu bamatyala ngu limited ukuba eyakho inombolo yefowuni, nto leyo kufunwa kuba ukuthumela positioning isiphumo. Ngokukhawuleza nje, ngakumbi i-data zenza igalelo, kukho ingozi ukuba uyakwazi kuwa lo msitho ukuba umrhumo, nangona iindleko kwimeko apho i-unobumba usebenzisa iselula kusenokuba confiscated. Msinyane lokuqala shock woyisayo kwaye khangela iqalwe, kufuneka umthetho ngokukhawuleza. Kuba Ukufunyaniswa omnye ke owakhe mobile phones, phambi kokuba ubhaliso kuyimfuneko, awathi, nangona kunjalo, ingaba ngakumbi ukuba anikele kunokuba nje iindawo i-phones.
Jikelele, ngu-ndlu Iinkonzo, apho bebe yenzelwe kwi-sikhokelo somgaqo-iselula uphuhliso kunye Nokhuseleko kunye kuba ezinye kwaphuhliswa. A kakuhle kakhulu-ezaziwayo Igama kule ndawo ingaba iCloud ukusuka inkcazo emfutshane. Luncedo ezi yogcino iinkqubo kukuba banako ukuphunyezwa khetha umbala kwaye umsebenzisi ayikho ngoko nangoko ngobukho yintoni kwimeko ubusela kakhulu ebalulekileyo. Ukuphendula umbuzo nokuba ifowuni ngu-intanethi okanye kwi-intanethi sifunyenwe, ngakumbi ifuna ukuba ube kwi-nkqubo. Spontaneous iselula iindawo asoloko-intanethi, ukusukela oko kuphela kuthungelwano lomthetho wekhredithi kwaye ukufumana inikezela kuba free iselula. Abo avume ufuna kulinganiselwa i-elula indawo umnxeba, kodwa ukususela a ngezixhobo ezahlukeneyo iinkqubo inzuzo, dependent kwi-Software ukuba kufuneka ifakwe kwangaphambili.
Kanjalo ikhonkco ngu ayifakwanga
Nkqu ukuba ezi iinkqubo ingafunyanwa kwi-intanethi kufuneka inikezelwe, indawo kunye uqhagamshelane soloko usebenzisa i inombolo umgca okanye ngesathelayithi, nto leyo ifuna uxhulumaniso kwi-Internet. Nokuba yomnxeba kunye drain, eya kuba umsebenzisi rhoqo efanayo okanye ubuncinane kakhulu efanayo, iziphumo zokukhangela akunjalo, ngoko ke efanayo.
Kuchaneka le ndawo Inkqubo-dependent, apho positioning wenziwa
Ezo Ndlela isetyenziswa e zahlukeneyo indawo, asiyiyo umsebenzisi-influenced
← Eyona Iindawo Kuhlangana Abafazi-Intanethi
Ufuna Ukuba Ahlangane A Watshata Wasetyhini Kwaye Kuba Ngesondo Reel Dating Site, Free Online Dating kwi Ufuna Ukuya Kuhlangana A Watshata Wasetyhini Kwaye Kuba Ngesondo Reel, KULUNGILE →